Askarigii dilaaga oo weli bannaanka jooga ayey qoyskii weriyaha la dilay weli dhowrayaan caddaalad | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Askarigii dilaaga oo weli bannaanka jooga ayey qoyskii weriyaha la dilay weli...
Askarigii dilaaga oo weli bannaanka jooga ayey qoyskii weriyaha la dilay weli dhowrayaan caddaalad
Sahra Ismaacil Cali, oo ah hooyada weriye sawirqaade Cabdirisaaq Qaasim Iimaan oo uu askari boolis ah ku dilay magaalada Muqdisho bishii Luulyo, 2018. (PHOTO by Hinda Dahir on Friday July 24, 2020).
Muqdisho (Xogdoon News) Galabnimadii bisha Luulyo 26keedii, 2018, weriye Cabdirisaaq Qaasim Iimaan, oo ah muuqaal duube da’diisu ahayd 19-jir, kana tirsanaa telefishanka gaarka loo leeyahay ee SBS TV ayaa kasoo laabanayey shaqo maalmeedkiisii caadiga ahaa isagoo muuqaal kasoo duubay xafladda qalin-jebinta jaamacadda SIMAD ee ku taalla magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen saaxiibadiis iyo qoyskiisa.
Intii uu ku socday gurigiisa ayaa sarkaal booliis ah joojiyay Cabdirisaaq bajajtii uu la socday, kaddibna madaxa ka toogtay taasoo keentay dhimashada Cabdirisaaq. Maydka ayaa la geeyay xarunta Dambi Baarista ee CID. Subaxii xigay ee 27-kii Luulyo, ayaa maydka la aasay iyada oo aan wax baaritaan ah la furin.
“Saraakiisha CID-da ayaa sawir ka qaaday maydka kaddibna waxay ku qoreen buugga dhacdooyinka ee OB. Kaddibna maydkii ayey u direen isbitaalka. Wuxuu isbitaalka xaqiijiyey in dhimashadu ay ka dhalatay rasaas kaga dhacday Cabdirisaaq madaxa. Waxaan aasnay meydka maalintii ku xigtay, ”ayuu yiri Qaasim Imaan Cosoble, oo ah aabaha 60-jirka ah ee Cabdirisaaq“ Boolisku ma furin wax baaritaan ah. ”
Soomaaliya waxay weli ka mid tahay meelaha ugu halista badan adduunka ee suxufiyiintu ka shaqeeyaan. Suxufiyiintu kaliya lama kulmaan xadgudubyo iyo dilal aan dhammaad lahayn – kuwa tacaddiyada geysta waxay had iyo goor la baxsadaan dembiyadooda, iyagoo ka faa’ideysanaya hubinaya in dhaqankan foosha xun ee la xisaabtan la’aanta uu sii socdo. Illaa 69-suxufi – oo ay ku jiraan labo sanadkan 2020 la khaarajiyay- ayaa lagu diley dalka ilaa 1992. Inta badan dhammaan suxufiyiintan ayaa ku jiray shaqo markii la beegsanayey.
Cabdirisaaq ayaa mar ka badbaaday weerar qaraxyo ah oo lagu qaaday hoteel ku yaalla magaalada Muqdisho sanadkii 2017 xilli uu halkaasi kasoo tabinayey warar. Laakiin howsha uu qabanayay maalintii la tooganayey ma ahayn mid halis ahayd, sida uu sheegay saaxiibkiis, Cabduwahaab Aadan Cabdiraxmaan.
Cabduwahaab wuxuu yiri “Markasta oo war bini’aadanimo soo baxo, wuxuu ahaa diyaar. Weligiis [Cabdirisaaq] kama uusan hadlin wax hanjabaad ah oo ka dhan ah noloshiisa. ”
Maalin kaddib aaskiisa, qoyska saxafiga ayaa u gudbiyay Maxkamadda dacwad dilka ku saabsan waxayna codsadeen in baaritaan dhab ah lagu sameeyo iyaga oo caddeynaya kalsooni darrada ay ka qabeenn booliska. Maxkamaddu waxay booliiska u qortay warqad ay ku weydiinayaan halka sarkaalka dilay weriyaha uu ku dambeeyay. Booliska ayaa dib ugu soo jawaabay waxayna sheegeen in dilaaga uu ka cararay saldhigga sidaasna uu baxsad ku yahay. Illaa hadda sarkaalka dilaaga ah wuxuu ku maqan yahay baxsad.
“Tan iyo markaas wax xiriir ah kama aanan helin booliska iyo maxkamadda. Sida iska cad iyagu ma ay dooneyn inay qabtaan dilaaga,” Qaasim oo ah aabaha Cabdirisaaq ayaa raaciyay.
Bishii Nofeembar 1, 2018 ayaa Maxkamadda Milateriga waxay ku heshey Saddex Xarigle Booliska, Cabdullaahi Axmed Nuur isagoo maqan inuu inuu dilay Cabdirisaaq, waxayna Maxkamaddu ku xukuntay shan sano oo xabsi ah iyo ganaax 100 neef oo geel ah, sida ku xusan dukumiinti xukun oo ka soo baxay maxkamadda. Si kastaba ha noqotee gacan ku dhiiglaha wali lama xirin, wuxuuna weli mushaharka ka qaataa booliiska.
Qoyska marxuumka ayaa sheegaya in dowladda, iyada oo soo mareysa Maxkamadda Millatariga, ay isku dayeyso in dilkii Cabdirisaaq ay u ekeysiiso mid kama’ ah iyada oo aan si adag u baarin dilka.
Dalka Soomaaliya wuxuu halka ugu hooseeysa kaga jiraa liiska waddamada ugu xun dhanka musuqmaasuqa, sida laga soo xigtay xogta diiwaanka indha-dheynta musuqa ee ay sameysay Hay’adda Caalamiga ah ee Transparency International, taasoo Soomaaliya ka dhigtay mid la dhibaatooneysaa tabar-darrida hay’adaha dowliga iyo xasillooni-darrada tooska u saameysa maamulka amniga aas-aasiga ah. Sababtaas awgeed, qoyska saxafiga la dilay ma doonayaan inay sii wadaan dacwadda Maxkamadda.
“Kuma qanacsanin xukunka maxkamadda. Waa iskuday macno darro ah oo la doonayo in lagu weeciyo caddaaladda aan raadineynay. Si fiican ayay u yaqaanaan dilaaga. Wuxuu weli lacagta mushaharka ka helaa booliska. Ma aysan baarin isaga. Mana rabaaninay soo xiraan illaa maanta,” ayuu yiri Qaasim oo ka xun go’aanka maxkamadda “Markasta oo maxkamadda derejada koowaad ay go’aan gaarto, maxkamadda sarena way ku raacdaa isla go’aankii. Kalsooni kuma qabo.”
“Waxaan fileynay in baaritaan dhab ah la sameyn doono. Waxaan fileynay caddaalad laakiin ma aanan helin. Rajadeenu way burburtay. Illaahay ayaan u samirnay,” aabe Qaasim ayaa intaa hadalkiisa ku sii daray.
Warbixinno hore ayaa sheegaya in xilliga la tooganayey weriye Cabdirisaaq uu isku dayayay in uu ka gudbo bar kontorool ee ku dhow Beerta Nabadda oo ah goob dadweyne oo ku taalla Muqdisho laakiin saaxiibkiis Cabduwahaab ayaa caddeeyay in Cabdirisaaq uu sitay kaamiradiisa waqtiga uu askariogu tooganayey taasoo ku filneyn inuu muujiyo aqoonsigiisa saxafinimo.
“Weli wuxuu sitay kaamiradiisa laakiin sarkaal boolis ah ayaa toogtay. Waxaa caado ah in booliisku u arko suxufiyiinta iyo kaamirooyinkooda kuwo cadow ah. Ma jirin wax sabab ah oo keeni karay toogashada Cabdirisaaq. Markii aan gaarnay goobta waxaan helnay kaamirada, oo ay ku jireen muuqaallo uu ka soo duubay jaamacadda, ”ayuu yiri Cabduwahaab oo hadda ka shaqeeya idaacad maxalli ah oo ku taalla Muqdisho.
Iyadoo ku dhex jirta gurigeeda oo ka sameysan darbado jiingad oo ku yaal xaafadda Xamar Jajab, Cabdirisaaq hooyadiis, Sahra Ismaaciil Cali, oo 53 jir ah, ayay gacantana ku heysaa dukumiinti muujinaya sawirka wiilkeeda iyo shahaadada dhimashada ee isbitaalka maxalliga ah. Waxay shahaadada caddaynaysaa in “Cabdirisaaq uu u geeriyooday laba xabbadood oo madaxa lagaga toogtay”.
“Illaa maanta qalbigeyga wuu ka go’i la’ yahay wiilkeyga. Qalbigaygu welwel buu la kacsan yahay. Laakiin waa ka xannuun badan tahay inaanan caddaalad u helin Cabdirisaaq,”ayay tiri Sahra iyada oo ku hadlaysa ereyadeeda.
Taasi ma’ahan cabsida kaliya ee ay qabto Sahra. Waxay sidoo kale u cabsaneysaa warfidoyeennada kale oo ay ku jiraan saaxiibada wiilkooda oo weli diyaar u ah inay warbixinnada runta ee danta dadweynaha la xiriira raadiyaan soona tabiyaan iyagoo ku dhex shaqeynaya magaalo halis u ah saxafiyiinta.
“Suxufiyiintu waxay u muhiim u yihiin dalkan. Waa in la ilaaliyo oo xuquuqdooda si wanaagsan loo dhowraa. Haddii aysan jirin suxufiyiin, ma maheli lahayn macluumaadka aan u baahan nahay ee ku saabsan waxa ka dhacaya agagaaraheena,” ayay Sahra ku nuux-nuuxsatay.
Kooxaha u dooda xuquuqda saxafiyiinta maxalliga ah waxay ku eedeeyaan dowladda Soomaaliya mowqifkeeda aan wanaagsaneyn ee ku aaddan hanjabaadda iyo rabshadaha suxufiyiinta Soomaaliyeed maalin walba ay la kulmaan. Iyada oo aan wax laga qaban arrinta dhameynta tacadiyada iyo la xisaabtan la’aanta dilayaasha, waxay kooxaha xuquuqda qabaan in dhibaatadu ay sii socon doonto. Sannadkan gudihiisa laba weriye ayaa lagu dilay dalka. Dilalkaasi midkoodna si sax ah looma baarin.
“Waa lagu dilayaa mana garaneysid. Isla xisaabtan la’aanta ka jirta Soomaaliya waa mid baahsan. Xitaa kuwa la yaqaan ayaa dilaya suxufiyiinta, ”Abduwahab ayaa sidaas leh.
Axaddii shalay waxay ahayd labo sanno-guuradii kasoo wareegtay weriyaha dhalinta yaraa ee Cabdirisaaq. Qoyskiisu waxay sii wadaan inay raadiyaan caddaalad. Toddobaadkii la soo dhaafay, Qaasim oo aabaha Cabdirisaaq wuxuu warqad u qoray xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud isagoo ka codsanaya in lasoo qabto askariga gacan ku dhiiglaha ee dilka geystay. Weli jawaab kama uusan helin Xeer Ilaaliyaha Guud.
“Waxaan rajeyneynaa in cadaaladdu guuleysato. Dilaaga wuxuu weli ka tirsan yahay Ciidanka booliska Galmudug. Waa in la qabtaa haddii ay cadaalad jirto,” ayuu Qaasim hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.
Previous articleCaynte oo shaaciyey dhinac ay awooddiisa ku wiiqantay go’aanadii Dhuusamareeb
Next articleJoint petition to the UN Working Group on Arbitrary Detention for Detained journalist Mohamed Abdiwahab Nuur
xogdoonnews - November 25, 2020